Ukufohla Enkungwini Ukuze Ngibone Ukukhanya | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Ngiyisisebenzi esijwayelekile. Ekupheleni kukaNovemba, 2013, umlingani engisebenza naye wabona ukuthi mina nenkosikazi yami sizohlala njalo sibanga umsindo ngezinto ezincane, nsuku zonke sasihlala sikhathazekile futhi silusizi, wase edlulisela kithina umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ngezinsuku zokugcina. Ezwini likaNkulunkulu uSomandla, sifunde ukuthi amazulu nomhlaba nazo zonke izinto zadalwa uNkulunkulu, nokuthi impilo yomuntu inikezwe uNkulunkulu. Saphinda saqonda iqiniso ngezimangaliso zohlelo lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, isimangaliso sikaNkulunkulu esesimweni somuntu, izigaba ezintathu zikaNkulunkulu zokusindisa isintu, ukubaluleka komsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ngezinsuku zokugcina, nokunye ukuhlonipha. Mina nenkosikazi yami sicabanga ukuthi okwenziwa uNkulunkulu ukuzosindisa abantu ngesikhathi sokuphila kwethu kwakuyisibusiso esikhulu. Ngenjabulo samukela umsebenzi kaNkulunkulu ngezinsuku zokugcina, sihola nebandla. Siholwa izwi likaNkulunkulu, sithungatha iqiniso sobabili ukuguqula izimpilo zethu, futhi noma kunini uma kwenzeka okuthile siqale siphikisane, besingalitholi iphutha komunye njengakuqala, kodwa besizindla sizame nokuzazi thina. Emva kwalokho, silandele indlela efulathela inyama ngokulandela imiyalelo kaNkulunkulu, nobudlelwane bethu emshadweni baba ngcono, futhi nezinhliziyo zethu zaba nokuthula nokuzinza. Sezwa ukuthi ukukholelwa kuNkulunkulu kuhle ngempela. Nakuba kunjalo, sathi sisathokozile futhi sijabulele ukulandela uNkulunkulu, sisathokozela impilo eyisibusiso, sabhekana nokuhlaselwa kobudlova okuvela emindenini yethu…. Kwathi ngisalahlekelwe indlela yami, kwaba izwi likaNkulunkulu elangihola ukuba ngibone amaqhinga kaSathane, ngafohla enkungwini ngase ngingena ekukhanyeni nasendleleni okuyiyo yokuphila.
Kwathi ngisanda kuthatha umhlalaphansi ngoNhlolanja 2014, umakoti wakwami wasithola njengabantu ababili abadala abazohamba baye e-Sichuan ukugada umzukulu wethu. Ngathandaza kuNkulunkulu: “Nkulunkulu Somandla! Umakoti wakwami ungicelile ukuba ngigade umzukulu wethu, kodwa angiyijwayele impilo kuleya ndawo, futhi akulula ukukholelwa kuNkulunkulu noma ukufunda izwi likaNkulunkulu kuleya ndawo. Ngiyethemba ukuthi uzosivulela indlela…” Akuphelanga isikhathi eside ngemuva kwalokho, umakoti wakwami wangishayela ucingo ethi uzoletha umzukulu wami kithina. Uma ngizwa lezi zindaba ngajabula kakhulu, ngezwa ukuthi uNkulunkulu uSomandla unjani. UNkulunkulu wawuzwa umthandazo wami wase engivulela indlela. Ngaphambi kokuba kudlule izinsuku eziningi, umakoti wakwami nabazali bakhe baletha umzukulu wami. Ngesikhathi kwenzeka lokhu, osukwini olulandela lolo ngangizoya embuthanweni, futhi ngabatshela ukuthi ngikholelwa kuNkulunkulu uSomandla. Ngemuva kokuzwa lokhu, umakoti wakwami ngokungathokozi wathi, “Baba ukholelwa kanjani kuNkulunkulu uSomadla? Nginesiqiniseko sokuba uyazi ukuthi uhulumeni akabavumeli abantu ukuba bakholelwe kuNkulunkulu uSomandla, futhi kule minyaka esanda kudlula bebebamba abantu abakholelwa kuNkulunkulu uSomandla. Ngeke ukwazi ukuqhubeka ukholelwe kuYena.” Ngamphikisa ngokuthi, “Uma sikholelwa kuNkulunkulu, asikwenzi ngoba siphikisa uhulumeni. Sithamela imibuthano, sifunda izwi likaNkulunkulu, sifune iqiniso, futhi silandele nendlela efanele. Bangangasivumeli kanjani ukuba singakholwa?” Umakoti wakwami wathi, “Noma ungathini, futhi noma ukukholelwa kuNkulunkulu kuyindlela elungile, inqobo nje uma uhulumeni ekuphikisa, awukwazi ukukholelwa kuYena!” Ngacabanga, “Noma ungathini, uNkulunkulu uqobo engikholelwa kuYena. Noma uhulumeni we-CCP engavumi, ngisazokholwa.” Ngokuhamba kwesikhathi, umakoti wakwami wahamba waya kumkami wamcela ukuba singakholelwa kuNkulunkulu…Ngemuva kwalokho, indodana yami ekude e-Sichuan yangishayela ucingo yathi, “Baba, Ngizwile ukuthi ukholelwa kuNkulunkulu uSomandla. Okuyinto engahambisani ne-CCP, ngakho-ke ngeke nisakwazi ukukholelwa kuYena.” Uma ngizwa indodana yami isho lokhu, ngezwa inhliziyo yami ishaywa uvalo: Ukukholelwa kuNkulunkulu kungumthetho wasezulwini kimina, ngakho kungani nonke nizama ukungivimba kukhona njalo? Kunzima ukukholelwa kuNkulunkulu futhi ulandele indlela efanele! Ngase ngithandaza buthule kuNkulunkulu ukuba angivikele ukuze ngimelane nokuphazanyiswa indodana yami nomakoti wakwami. Ngemuva kokuthandaza, inhliziyo yami kancane kancane yaba nokuthula. Nakuba indodana yami nomakoti wakwami bengakuqondanga, kwangicacela ukuthi ukwethemba uNkulunkulu nokulandela indlela efanele kwakungelona iphutha, futhi akufanele bangithonye. Ngemuva kwezinsuku ezintathu, umakoti wakwami wafika ekhaya ngokushesha egijima, futhi ngabona ukuthi kunengqumbi yokuthile okushicilelwe ezandleni zakhe. Wase engicela ukuba ngiyibheke ngokushesha, kwathi uma ngibuka ngabona ukuthi kugcwele amahebezi namanga kahulumeni we-CCP uthunaza, ugxeka, futhi adicelela phansi iBandla likaNkulunkulu uSomandla. Isikhashana ngaba nokudideka enhliziyweni yami, ngase ngicabanga ukuthi: Akukwazi, sengithamele imihlangano izinyanga eziningana futhi angikaze ngibone abafowethu nodade bengenazo izingalo noma imilenze! Kungani uhulumeni we-CCP efuna ukusabalalisa amahlebezi nokudicilela phansi iBandla likaNkulunkulu uSomandla? Yini ngempela eqhubeka la? Ebusuku ngalolo suku, angikwazanga ukulala ngoba ngangilokhu ngicabanga ngalokhu emqondweni wami. “Maye! Indodana yami nomakoti wakwami bazama ngamandla ukungivimba, futhi nohulumeni we-CCP uzama ukungishushisa, ngakho yini okufanele ngiyenze?”
Ngosuku olulandelayo, ngaphuma ngazulazula endaweni eseduze nathi, ngabona lawa mahlebezi ahlambalazayo futhi agxeka iBandla likaNkulunkulu uSomandla efakwe ebhodini lezindaba. Ngacabanga: Engikholelwa kukho uNkulunkulu weqiniso, kungani uhulumeni we-CCP ephikisana nakho ngale ndlela? Kubukeka sengathi esimweni sokungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu esilawulwa i-CCP, ukukholelwa kuNkulunkulu eqinisweni akuyona into elula! … Uma ngicabanga ngalokhu, ngezwa ubuthakathaka enhliziyweni yami, ngabuyela ekhaya ngidangele futhi ngidumele. Uma ngifika nje ekhaya, umakoti wakwami waphinda wathi kimina, “Baba, ngiyakucela ukuba ulahle ukholo lwakho. Uma uhulumeni engathola ukuthi ukholelwa kuNkulunkulu, ngizolahlekelwa umsebenzi, futhi indodana yakho maduze izothola iziqu zobudokotela ngeke ikwazi ukuthola umsebenzi. Nomzukulu wakho angase azithole ekule nto, futhi kungenzeka ukuthi esikhathini esizayo angakwazi ukuya esikoleni.” Uma ngizwa lokhu, ngacabanga ukuthi le inhlekelele. Ukukholelwa kuNkulunkulu kungaze kubandakanye ikusasa lezingane zomuntu! Ngaba nokwesaba okukhulu, futhi ngangazi ukuthi izindlela zikahulumeni we-CCP zokujezisa abantu zinonya kakhulu, zinonya kangangokuthi ungaze uthi “babulala abantu ngaphandle Kokucwayiza.” Ngaphinde ngacabanga ukuthi ngeke kube lula kimina ukuba ngithwese indodana yami iziqu zayo zobudokotela, futhi manje yini engizoyenza uma ukukholelwa kuNkulunkulu kubandakanya nendodana yami? Kungcono ngimane ngikhohlwe ikhona. Umvuzo engizowuthola ngokukholelwa kuNkulunkulu kanye nokulandela indlela efanele unzima kakhulu. Futhi, umakoti wakwami wangisabisa, wathi, “Ubaba wami uthe uma uqhubeka ukholwa, uzobikela amaphoyisa. Uyazi ukuthi ubaba wami ungunobhala wenhlangano, futhi usenikele ngempilo yakhe iminyaka engaphezu kwamashumi amathathu kubona. Uyezwa futhi alalele noma yini efunwa i-CCP. Uyakufeza akushoyo futhi lokhu akukhona nje ukuzama ukukusabisa.” Ukulwa okusenhliziyweni yami kwaphela nya futhi kwabhidlika, futhi ngezwa ukuthi kunzima kakhulu ukukholelwa kuNkulunkulu, nengcindezi inkulu kakhulu. Indodana yami nomakoti wakwami uma bengihlasela kanje, uma ngempela befuna ukungibika kuhulumeni we-CCP ukuze ngiboshwe futhi ngivalelwe ejele, indoda endala njengami ngeke imelane nento efana neleyo. Angikhohlwe, kungcono ngilahle ukholo lwami. Emva kwalokho, angiyithamelanga imibuthano, abazalwane bafika endlini yami bengifuna izikhathi eziningana futhi ngangihlala ngicasha ukuze bangangitholi.
Kodwa ngaleso sikhathi ngingathameli imibuthano, uma ngicabanga ukuthi kwakunguthando olukhulu lukaNkulunkulu olwangisindisa enhluphekweni yami futhi ubumnene nenjabulo yabazalwane nami ihuba amahubo futhi sidumisa uNkulunkulu nabo, ngakhumbula futhi ngikulangazelela kakhulu kodwa ngesaba umakoti wakwami kanye nabanye abazongibika emaphoyiseni. Ngezwa izinhlungu ezinkulu nokuhlukumezeka kwenhliziyo futhi angazanga ukuthi okuphi okufanele ngikwenze. Ngaleso sikhathi, umlinganeengisebenza naye (umzalwane okholelwa kuNkulunkulu) wafika endlini yami engivakashele ezobona ukuthi kungani ngingasayithameli imibuthano manje. Ngamuchazela ukuthi umakoti wakwami ubengihlukumeza kanjani ngokukholelwa kuNkulunkulu. Emva kokuzwa lokhu, wangishumayeza, “Uma sihaqwa yilezi zinto, eqinisweni impi kamoya. Kufana nezivunguvungu uJobe ayebhekene nazo, uma ubuka ungajuli kubukeka sengathi zadalwa izigebengu ezamtshontshela, kodwa eqinisweni okwenza lokhu kwakunguSathane ehlupha isintu futhi elwisana nabantu ngoNkulunkulu. Ngoba uJobe wayemesaba uNkulunkulu futhi wayekwazi ukwenqaba ububi, ekugcineni wakwazi ukuma afakazele uNkulunkulu ngesikhathi uSathane ehlambalazekile ngokunqotshwa. Ngakho-ke uma sihaqwa yilezi zinto, inhloso kaNkulunkulu ukuba sikwazi ukuhlukanisa umongo kaSathane wobubi. Uma sikholelwa kuNkulunkulu, esikudingayo nje ukwethembela kuNkulunkulu, sifune uqiniso, silangazelele emoyeni, futhi kulapho kuphela sizokwazi ukubona amaqhinga kaSathane futhi simele ubufazi! Bese sigwema ukuthunjwa uSathane. Ngale kwalokho, sizolahlekelwa ithuba lokuthola insindiso.
Emva kwalokho umlingane wami engisebenza naye wangifundela izwi likaNkulunkulu uSomandla: “UNkulunkulu uyasebenza, uNkulunkulu unakekela umuntu, ubheka umuntu, kanti uSathane uyamlandelisisa. Noma ngubani uNkulunkulu amenzela umusa, uSathane naye uyamqapha, amlandele ngemuva. Uma uNkulunkulu efuna lo muntu, uSathane angenza konke okusemandleni akhe ukuvimba uNkulunkulu, ngokusebenzisa izindlela ezimbi ezininginingi ukulinga, ukuhlupha nokuphihliza umsebenzi uNkulunkulu awenzayo ukuze afeze injongo yakhe efihliwe. Ingabe yini injongo yakhe? Akafuni ukuba uNkulunkulu abe nanoma ubani; ufuna bonke labo uNkulunkulu abafunayo, ukuba babe ngabakhe, ukubalawula, ukubaphatha ukuze bakhonze yena, ukuze benze izenzo ezimbi kanye naye. Ingabe akusona lesi isisusa sikaSathane esibi? Ngokujwayelekile, uvame ukuthi uSathane ukhohlakele, mubi kakhulu, kodwa uke wambona? Ungakwazi ukubona kuphela ukuthi umuntu mubi kangakanani kodwa awukaboni eqinisweni ukuthi uSathane ukhohlakele kangakanani ngempela. USathane usempini noNkulunkulu, elandela njalo ngemuva Kwakhe. Injongo yakhe ukudiliza wonke umsebenzi uNkulunkulu afuna ukuwenza, ukuthathela kuye nokulawula labo uNkulunkulu abafunayo, ukucima ngokuphelele labo uNkulunkulu abafunayo. Uma bengapheliswanga nya, baba ngabakaSathane ukuze basetshenziswe nguye—lena injongo yakhe” (“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV” kwincwadi Ukuqhutshwa kwesithi Izwi Livela Enyameni”). “Kufanele uvuke futhi uhlale ulindile zikhathi zonke, futhi uze kiMina njalo. Kufanele uwabone amasu ahlukene kanye namaqhinga obuqili bukaSathane, wazi umoya, wazi abantu futhi ukwazi ukuhlukanisa zonke izinhlobo zabantu, izindaba kanye nezinto; kufanele udle futhi uphuze amazwi Ami njalo futhi, okubalulekile, kufanele ukwazi ukuwadla nokuwaphuza ngokwakho. Zihlomise ngalo lonke iqiniso, uze phambi Kwami ukuze ngikuvule amehlo akho kamoya futhi ngikuvumele ubone zonke izimangaliso ezilele ngaphansi kukamoya…” (“Amazwi Esikhombisa” Ezwini Elivela Enyameni).
Ngemuva kokuqeda ukufunda izwi likaNkulunkulu, umlingane wami engisebenza naye wangishumayeza ngalo, wathi: Impi kamoya ijulile uma sihaqwe yilezi zinto. Manje, umhlaba wonke ungaphansi kokubuswa uSathane, omubi, futhi uSathane uyaqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe wokukhohlakalisa abantu. Ufuna ukuphatha ngokugcwele futhi abhubhise isintu esidalwe uNkulunkulu, futhi le yinhloso kaSathane embi. Uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha elokusindisa abantu ebumnyameni bethonya likaSathane. Ikakhulukazi esikhathini samanje ezinsukwini zokugcina, ukuveza izwi Lakhe, uNkulunkulu wenza isigaba sokugcina somsebenzi wokuhlanza kanye nokusindisa isintu, futhi uSathane uyasaba ukuthi sizokwamukela umsebenzi kaNkulunkulu, nokuthi sizoqonda iqiniso bese sithola insindiso. Uyesaba ukuthi sizohlukanisa ububi bakhe kanye nomongo ophindisela emuva, sikulahle, futhi sikushiye. Ngenxa yalokhu useminjunjwini yempi yokugcina yokulwela impilo– ulwisana noNkulunkulu ngabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo futhi usebenzisa isu elidelelekile ukusivimba ukuba size phambi kukaNkulunkulu. Izinhlelo ezifana nokucindezela kanye nokubanjwa okwenziwa i-CCP, ukuhlakazwa nokushushiswa kwamalungu emindeni kanye nawo wonke amahlebezi nokuhlambalaza okusatshalaliswa iziyingi zenkolo kanye nohulumeni we-CCP konke kusetshenziswa ukuze kusivimbe singaphendukeli kuNkulunkulu. Kodwa ubuhlakani bukaNkulunkulu buyasetshenziswa bususelwa ohlelweni lukaSathane, futhi uNkulunkulu manje usebenzisa ukuhlakazwa kukaSathane ekwenzini umsebenzi kaNkulunkulu. Ngalokhu uphelelisa ukholo lwethu kanye nokuthembeka. Ngaphandle, yindodana yakho nomakoti wakwakho kanye nohulumeni we-CCP basebenzisa zonke izinhlobo zamaqhinga kanye nemizamo ukusivimba kanye nokusiphazamisa ekukholweni kuNkulunkulu, kodwa eqinisweni ngemuva kwalokhu iqhinga elisetshenziswa uSathane. Inqobo nje uma senza okuningi ukufuna iqiniso nokuqonda intando kaNkulunkulu, sibe nolwazi ngomsebenzi kaNkulunkulu, sizokwazi ukuhlukanisa wonke amaqhinga namacebo okuphamba kaSathane, futhi sizokwazi ukuma sifakazele uNkulunkulu, uSathane uzohlambalazeka ngokunqotshwa. Uma nje singafuni ukuqonda iqiniso futhi singaqondi impi yakamoya, uma uSathane edala ukuhlakazeka kithina siyakwazi ukuphambuka futhi sibe nokungabaza uNkulunkulu futhi sigcine siphika uNkulunkulu, sikhaphele uNkulunkulu, futhi sishiye uNkulunkulu ngemuva. Ngale ndlela kuzokwenzeka ukuthi ube isisulu samaqhinga kaSathane futhi uphuthelwe ithuba lokuthola insindiso. Ekugcineni uzodliwa uSathane. Ngakho-ke nakanjani kufanele senze okuningi ukuze sithandaze futhi sizisondeze eduze kukaNkulunkulu, futhi senyuse ukufunda izwi likaNkulunkulu futhi sihlome ngeqiniso. Kungale ndlela kuphela lapho singaqonda intando kaNkulunkulu, sibone amaqhinga kaSathane, futhi sime sifakazele uNkulunkulu.
Ngokufunda izwi likaNkulunkulu futhi nangentshumayelo yomlingani wami engisebenza naye, ngasheshe ngabona ukuthi: Le impi kamoya. UNkulunkulu uveza iqiniso ngezinsuku zokugcina ukuze asindise abantu, kodwa uSathane ucabanga zonke izindlela ezikhona ukuze asebenzise ingcindezi nokuhlushwa indodana yami, umakoti wakwami, nohulumeni we-CCP ukungivimbeli ukukhonza uNkulunkulu nokulandela uNkulunkulu. Uyasaba ukuthi ngizokwamukela umsebenzi kaNkulunkulu ngezinsuku zokugcina futhi ngiqonde iqiniso. Ngakho-ke ngizohlukanisa umongo wobubi bakhe, ukona, ubusathane, amadimoni bese ngiyamkhaphela futhi ngimushiye, ngiphinde ngithole insindiso kaNkulunkulu. Namhlanje, ngigcine ngilubonile unya lukaSathane oludelelekile futhi ngaqonda nesineke sokunginakekela kanye nomcabango uNkulunkulu awubekela ukusindisa mina. Emva kwalokhu, ngizofunda izwi likaNkulunkulu kakhulu futhi ngizihlomise ngeqiniso ukuze ngingadlali uSathane. Imimoya ebengiyivimbile esikhathini eside kangaka ekugcineni ikhululiwe ezwini likaNkulunkulu, futhi ngazizwa ngijabule kakhulu sengathi ngibona ukukhanya kwasemini futhi. Nakuba bengiqonda ukuthi ukuhlushwa umakoti wakwami ngokukholelwa kuNkulunkulu bekungamanye nje amaqhinga kaSathane, nokuthi akufanele ngenziwe isilima uSathane, bengisakhathazekile ukuthi uma uhulumeni we-CCP ethola mayelana nokholo lwami kuzoba nomthelela emsebenzini wendodana yami nomakoti wakwami. Futhi bengisaba kakhulu ngomthelela okuzoba nawo kumzukulu wami uma eseya esikoleni. Ngakho-ke ngatshela umlingani wami engisebenza naye mayelana nokwesaba kwami futhi wangifundela esinye isiqephu ezwini likaNkulunkulu uSomandla: “Igunya likaNkulunkulu likhona kungakhathaliseki ukuthi izimo ziyini; kuzo zonke izimo, uNkulunkulu onquma futhi ahlele ukudalelwa kwawo wonke umuntu, futhi zonke izinto zenzeka ngokuvumelana nemicabango Yakhe, nezifiso Zakhe. Lokhu ngeke kushintshe ngenxa yokuthi abantu bayashintsha, futhi akuncikile ezintweni ezithandwa umuntu, ngeke kushintshwe yinoma yiziphi izinto ezenzeka esikhathini, emkhathini, nasendaweni, ngoba igunya likaNkulunkulu linguye uqobo Lwakhe. …Ngazo zonke izikhathi uNkulunkulu alawula ngazo igunya Lakhe, ubonisa amandla Akhe, uqhubeka nomsebenzi Wakhe wokuqondisa; ubusa zonke izinto ngazo zonke izikhathi, unakekela yonke into, uqondisa yonke into, njengoba ayehlale enza. Akekho ongashintsha lokhu. Kuyiqiniso; bekulokhu kuyilo selokhu kwathi nhló!” (“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III” kwincwadi Ukuqhutshwa kwesithi Izwi Livela Enyameni). Emva kokufunda izwi likaNkunkulunku, umlingane wami engisebenza naye waqhubeka wangishumayeza ngalo wathi: UNkulunkulu unguMdali, unguphezukonke emazulwini, emhlabeni, nasezintweni zonke ezingaphakathi. Ulawula isimiselo sawo wonke umuntu, futhi noma uhlobo luni lomsebenzi noma ikusasa lethu ngabanye lanqunywa kudala uNkulunkulu. Lokhu into engeke inqunywe noma iguqulwe umuntu ngokwakhe. Umsebenzi nekusasa lendodana yakho kanye nomakoti wakwakho konke kulawulwa uNkulunkulu. Akusho lutho ukuthi bakholelwa kuNkulunkulu noma abakholelwa; isimiselo sabo sanqunywa futhi salungiswa uNkulunkulu. Asikho isidingo sokuzikhathaza ngalokhu noma ngalokhuya. UJobe akaze akhathazeke ngakho, ngoba kwakusobala kuyena ukuthi konke ayenakho wayekunikwe uNkulunkulu, futhi noma yini anikezwa yona noma aphucwa yona kwenza uNkulunkulu. Ngakho-ke kufanele sizihluphe ngokuthandaza kuNkulunkulu, futhi sibeke ikusasa lamadodana ethu namadodakazi ethu ezandleni zikaNkulunkulu futhi sibe nethemba ukuthi uNkulunkulu unohlelo olufanele…. Ngalawa mazwi ngishunyayezwe ngawo mayelana nokwazi umyalelo kaNkulunkulu, senginethemba kuNkulunkulu, futhi nginokuzinza nokuthula enhliziyweni yami. Ngeke ngisakhathazeka ngekusasa lendodana noma likamakoti wakwami.
Emva kwalokhu, ngokufunda izwi likaNkulunkulu, ngaba nenqubekelaphambili ngokwazi umongo wobubi nonya lukahulumeni we-CCP kuNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi: “Udeveli uwubambe ngqi wonke umzimba womuntu, umkopolote womabili amehlo, wawuvala wawuqinisa umlomo wakhe. Inkosi yodeveli ibilokhu uphulukundlela zonke lezi zinkulungwane zeminyaka, kuze kube namuhla, ngesikhathi isanake idolobha lezipoki, njengokungathi isigodlo samademoni esiqinile; ngesikhathi esifanayo, lezi zinja ezigadile, ziwakhiphe wonke amehlo, zesaba ukuthi uNkulunkulu uzozibamba zinganakile aziqothule, azishiye zingasenayo indawo yokuthula nokujabula. Babengambona kanjani uNkulunkulu abantu besipokwe sedolobha abafana nalaba?” (“Umsebenzi Nokungena (8)” Ezwini Elivela Lisenyameni). Izintshumayelo kanye Nokuhlanganyela Ekungeneni Ekuphileni kuphinde kuthi: “Enhliziyweni kadrako omkhulu obomvu, ucabanga ukuthi uNkulunkulu ufikele ukumphuca bonke abantu bakhe, futhi uzenza isitha sakhe. Lo drako omkhulu obomvu ongujuqu futhi uyinto engacabangelani! Isintu sidalwa uNkulunkulu, futhi uNkulunkulu unegunya lokusindisa isintu. Kwasekuqaleni, isintu esakaNkulunkulu, futhi udrako omkhulu obomvu osethathe ngendluzula abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo, wabakhohlakalisa futhi wabanyathela ngokwentando yakhe, ekugcineni wabadla bonke. Nakuba kunjalo, uma uNkulunkulu ebuya ezosindisa abantu uyamuphikisa Yena. Singakwazi ukubona ngalokhu ukuthi imvelo esemqoka kadrako omkhulu obomvu ukuphikisana nezulu, ukuphindisela emuva, ukungacabangelani, nobuwula obukhulu. Uyisilwane sasendle kanye nedimoni” (“Iqiniso Lokubaluleka Ekushiyeni Udrako Omkhulu Obomvu Ukuze Uthole Insindiso” kwincwadi Izintshumayelo Nokuhlanganyela Ekungeneni Ekuphileni (III)). Manje, ngiyaqonda ukuthi ezweni elingakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu umyalelo we-CCP ungumyalelo kaSathane. Awuvumeli uNkulunkulu ukuba afike kule ndawo futhi enze umsebenzi wokusindisa abantu, futhi awubavumeli abantu ukuba bagqashule ethonyeni lawo lobumnyama futhi bazuzwe uNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu abaholele esiphethweni esihle. Ngakho wenza konke angakwenza ukwenqaba futhi nokugxeka uNkulunkulu uSomandla nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ngokusabisa uphazamisa futhi asivimbe ukulandela uNkulunkulu uSomandla. Uma singenalo iqiniso, singazazi izinhlelo ze-CCP, futhi singawuboni umongo wayo, kuzoba lula ukuba siholeleke ekuphambukeni ngalo lonke uhlobo lwamanga ewasaphazayo, noma sisabe bese siyazinikela ekucindezelweni nasekuhlushweni. Ngeke sizame ukusondela phambi kukaNkulunkulu, futhi lokhu kuchaza ukuthi isizuze inhloso yayo yokudla abantu nokucekela phansi umsebenzi kaNkulunkulu wokusindisa abantu. Kodwa akekho noyedwa ongangena ebuhlakanini bukaNkulunkulu. UNkulunkulu usebenzisa ukuhlushwa i-CCP ukwenza umsebenzi wokuphelelisa abantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu, ukuvumela abantu ukuba baqonde iqiniso, futhi baqonde ngokugcwele ukuthi uhulumeni we-CCP idimoni likasathane eligcwele inzondo ngeqiniso futhi uthatha uNkulunkulu njengesitha sakhe, ukuze bawushiye ngokuphelele futhi babheke kuNkulunkulu ngokugcwele. Kufana nangesikhathi ngithola ukuhlushwa, kulokho indodana yami nomakoti wakwami, kanye nabazali bakamakoti wakwami, bonke babephanjukiswa amanga kahulumeni we-CCP. Ngaphansi kwengcindezi ye-CCP isebenzisa ngokungafanele amandla ayo, bangiphoqelela ukuba ngihlubuke kuNkulunkulu uSomandla benza ukuba ngiphuthelwe ukuthola insindiso kaNkulunkulu uSomandla. Kodwa manje, ngokufunda izwi likaNkulunkulu, sengibona ngokusobala ukuthi uhulumeni we-CCP usebenzisa amanga ukuphambukisa abantu, futhi usebenzisa izindlela zodlame olusabekayo ukubekela abantu imikhawulo nokubayekisa ukukholelwa kuNkulunkulu. Sengibonile ukuthi inhloso yakhe ukuba asilawule sonke futhi ekugcineni asilimaze futhi asidle. Uma ngilokhu ngicabanga ngalokhu, ilapho ngiba nenzondo yedimoni likasathane, lo drako omkhulu obomvu oyi-CCP. Unonya, ugibela ngendluzula kubantu, acindezele futhi ahluphe labo abakholelwa kuNkulunkulu. Ubugebebengu bakhe obubi ngempela bungenelela nasemazulwini, futhi nakanjani uzojeziswa uNkulunkulu! Kuyangithokozisa ukulandela izwi likaNkulunkulu, elingivumela ukuba ngihlukanise umongo kasathane we-CCP wokwenqaba uNkulunkulu nokuthi ngingabe ngisavinjwa ukusatshiswa yiwo. Futhi kuyangijabulisa ukuthi uNkulunkulu wenze ukuba umlingane wami engisebenza naye afike ekhaya lami futhi wangisiza esikhathini lapho ngangenqaba futhi ngintekenteke, futhi sengiwile naphansi ngilahlekelwe indlela yami. Wasebenzisa izwi Lakhe ukungihola futhi wangisindisa ekulingweni uSathane, futhi wangenza ngadlubulundela esidlekeni sikaSathane ngabuyela phambi bukaNkulunkulu ngathola nethuba lokwamukela insindiso. Sengikusombululile lokhu noma ngabe kunobunzima obungakanani obukhona endleleni engisazoyihamba, ngizolandela uNkulunkulu uSomandla yonke indlela kuze kube sekupheleni!
Okwedlule：Ukuhlangana neNkosi Futhi
Okulandelayo：Ukukhanya Kufudumele Uma Udlula Emhubheni
u-Enhui, eChina Ngingowesifazane ojwayelekile wasemakhaya, futhi ngangivame ukusindwa yimithwalo enzima yekhaya. Ngenxa yalokhu, omoya wami waba yinto…